Kedu ihe m nwere ike ịzụta site na ụlọ ọrụ "Pure Player"? | ECommerce ozi ọma
E-commerce enweela mmetụta dị ukwuu n'ahịa dị ugbu a, karịsịa na ụlọ ọrụ ndị na-enweghị nnukwu nkwado na ịntanetị bụ, agbanyeghị ụfọdụ ụlọ ọrụ jisiri ike imelite onwe ha ma mesịa mechaa ọ marawanye site na ịntanetị. Agbanyeghị, enwere ụlọ ọrụ sitere na ịntanetị ma ọ bụ naanị na ịntanetị, ọ nweghị ebe anụ ahụ onye na-azụ nwere ike ịga leta ma zụta ngwaahịa, ụlọ ọrụ ndị a ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị a na-enweta aha “Ndị Ọcha Dị Ọcha”, ebe ọ bụ na ejiri ha mara nke a yana yana ịnwe ọnụ ala na ngwaahịa ha, nke site n'oge ruo n'oge na-adị mfe karịa ụlọ ahịa ọdịnala. Ọzọ anyị ga-ewebata gị ngwaahịa kachasị zụrụ na ụdị ụlọ ahịa ndị a.
1 Ejiji N'ịntanetị
2 Superlọ ahịa n'ntanet
na ụwa ejiji, E nwere ọtụtụ ụdị nke ndị na-emepụta ndị nwetaworo otuto n'ihi atụmatụ ha na ọnụ ahịa dị oke elu. N'okwu a, enwere ebe ịntanetị dị ka "Privalia", nke na-elekwasị anya na azụmaahịa ejiji, na-etinye ụdị ndị mmebe dị iche iche maka ọrịre na weebụsaịtị ya, na-ejedebeghị nanị otu, na ịme nnukwu ego iji dọta ndị na-azụ ahịa na ngalaba gị.
Superlọ ahịa n'ntanet
Ọ bụghị naanị ntụsara ahụ zụta uwe na ntanetị, ma enwerekwa ike ịzụta nri gị n'ịntanetị ma nyefee ya ozugbo n'ọnụ ụzọ gị. Ulabox otu ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na Spain bụ nke a ma ama, na-enye onyinye dị iche iche na ngalaba ya dị iche iche nke nri, ihe ọveraụveraụ, ịdị ọcha na ihe ndozi ụlọ.
La ire ngwa ulo Ọ dịtụbeghị mfe na ụlọ ọrụ dịka Amazon, nke bụ ọnụ ọgụgụ mbụ na saịtị e-commerce na n'otu ụzọ ahụ na-ere ngwaahịa ngwaahịa ụlọ na ntanetị, nke n'otu ụzọ ị nwere ike ịzụta n'ụlọ gị ma nwee ike ịnapụta gị n'ọnụ ụzọ gị .
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Kedu ihe m nwere ike ịzụta site na ụlọ ọrụ Player Pure Player?
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Inbound Marketing